သီတင်းကျွတ်မှာလူကြီးမိဘများကို ယိုးဒယားကထွက်တဲ့ NIPDA Smart Phone နဲ့ ကန်တော့ဖို့ အထူး Promotion(2.10.2016မှ16.102016) - မောင်ပေါက် ( Maung Pauk )
သီတင်းကျွတ်မှာလူကြီးမိဘများကို ယိုးဒယားကထွက်တဲ့ NIPDA Smart Phone နဲ့ ကန်တော့ဖို့ အထူး Promotion(2.10.2016မှ16.102016) သီတင်းကျွတ်မှာလူကြီးမိဘများကို ယိုးဒယားကထွက်တဲ့ NIPDA Smart Phone နဲ့ ကန်တော့ဖို့ အထူး Promotion(2.10.2016မှ16.102016) Thiha Htike
မင်္ဂလာပါ ဆွေသဟာ မှ လူကြီးမင်းများကို သီးတင်းကျွတ်မှာ မိမိထက်ကြီးသူ မိဘ ဆရာသမားများကို ပစွည်းမှန်သည့်ယိုးဒယားဟန်းဆတ်ဖြင့် ကန်တော့နိုင်အောင် အထူး
ချပေးလိုက်ပါပြီ ယခု ပြောတဲ့ ဟန်းဆတ်ဟာဆိုရင် ယိုးဒယားမှာ နာမည်ရှိပြီးသားပါ အသေးစိတ်ကိုတော့ သူ့ရဲ့ Official Website မှာသွားရောကလေ့လာနိုင်ပါတယ်
၀ယ်ယူချိန်ကစပြီး တစ်လအတွင်း Error တစ်ခုခုဖြစ်ခဲ့ရင် အသစ်တစ်လုံးနဲ့ပြန်ချိန်းပေးပါတယ်ခင်ဗျာ နောက်ပြီးတော့ promotionချတဲ့နေရာမှာလည်းအမျိူးမျိူးရှိပါတယ်အောက်မှာ ကြည့်လိုကနော်
သီတင်းကျွတ်အတွက် ယိုးဒယားဟန်းဆတ် ပရိုမိုးရှင်း
present=SIM Card,Bill Card,Application,Game,Facebook Account,power Bank 2600mah
Promotion=77000 Kyat Pacific-ip6 smartphone
================== Android Version=5.1
Ram 1 GB/Rom 8 GB MicroSD upto 32 GB
6" QHD IPS LCD Capacitive 960*540pixels
2 simcard Support
GSM 2G : 800/900/1800/2100 MHz. WCDMA 3G : 850/2100MHz.
Front 5.0 MP / Rear 8.0 MP
FM Tuner/Video-Music Player
ရန်ကုန်မြို့တွင်းရှိ ဆိုင်များ သို့ပစွည်းများကိုလာရောက်ရောင်းချပေးပါသည် ပို့ခမယူပါ ။ ။ ရန်ကုန်မြို့တွင်းရှိသုံးစွဲသူ user များကိုလာရောက်ပို့ဆောင်ပေးပါသည် မည်သည့်နေရာမဆို ပို့ခ၃၀၀၀့ ပါ နယ်များတော့ မည်သည့်နေရာမဆိုပေးပို့ပေးပါသည်။ ။
နယ်မှ မှာယူသူများအတွက် ပို့ခအခမဲ့ ဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ။ ။